ကမ်းလွန်ဘဏ် တစ်ဦးအမည်းစက်နှင့်အတူကြွလာ။ ဒါကြောင့်များစွာသောလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးပညာရှင်များနားမလည်ကြဘူး။ တချို့ကသူတို့အနေနဲ့ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထဲမှာလုံခြုံစွာသူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်နိုငျသောမျှသာဖော်ပြထားခြင်းမှာအောက်မှာ။ အစာရှောင်ခြင်း, စျေးကြီးလှေများ၏ပုံများ, မူးယစ်ရာဇာများနှင့်အဖြူရောင်ဝတ်စုံစိတ်ထဲချက်ချင်းလာကြ၏။ ထို့အပြင်စာနယ်ဇင်းအတွက်မကောင်းတဲ့ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်များ, ရုပ်မြင်သံကြားရှိုးများ, နှင့်အနှုတ်လက္ခဏာပုံဖော်ခြင်း၏ပြန့်ပွားကဤအမြင်ပြောင်းလဲမထားပါဘူး။ သူတို့ဟာအမှန်တရားကနေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အမှန်မှာဒီဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်အခွန်ဟေဗန်အဖြစ်လူသိများကမ်းလွန်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာများ (OFC) သို့မဟုတ်ဘဏ်များသည်, အနည်းငယ်အဓိကအကြောင်းပြချက်များအတွက်အများအားဖြင့်တည်ရှိနေ။ သင့်ရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ် မူတည်. - သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပိုင်ဆိုင်မှုကြီးထွားမှု, နှင့်အခွန်လျှော့ချပေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြီးများနှင့်အသေးစား, နိုင်ငံခြားတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ဖို့ဖြည့်တင်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများငါသိ၏။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဟေဗန်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးစင်တာများယနေ့လူရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအများအပြားမှအစစ်အမှန်ကမ္ဘာကဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုင်းငံ့တရားစွဲမှုထံမှပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုရှာဖွေနေသူတို့အားကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဒေသခံတစ်ဦးမတည်မငြိမ်အစိုးရ၏ဖုံးကွယ်လျော့ပါးရန်လမ်းအဖြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သေချာပါစေခြင်းငှါ၎င်းထိုသို့အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုနှင့်အတူတစ်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပေါင်းစပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပေါင်းစပ်မှုနှင့်အတူကသာမန်ဘေးထံမှပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောဘေးကွာရှင်းဆင်းရဲသောစျေးကွက်အခြေအနေများ, သို့မဟုတ်တရားများပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကားအန္တရာယ်များအနောက်ကမ္ဘာအတွက်ဘုံတွေ့ဆုံဖြစ်ကြသည်။
နိုင်ငံခြားလူမျိုးအဘို့အကောင့်ဖွင့်သည့်အခါကမ္ဘာတဝှမ်းဘဏ်များတဦးတည်းရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ရှိသည်။ အဲဒီအတွက်ကောင်းသောသူမြားကိုစောငျ့ရှောကျမြားနှငျ့မကောင်းတဲ့သူတွေကိုထွက်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကိုသူတို့ကသံသယလှုပ်ရှားမှုသံသယအခါအခြားလမ်းကြည့်လျှင်တစ်ဦးကဘဏ်က၎င်း၏လိုင်စင်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကတင်ထားတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့မဟုတ်ယူရိုငွေအတွက်ရန်ပုံငွေများဝါယာကြိုးမှနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သည့်အခါဒီတော့ကြွင်းသောအရာစိတ်ချပါ, ဘဏ်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာစာရွက်စာတမ်းများပေးအပ်အပေါ်လျှောမသွားပါစေလိမ့်မယ်။ သူတို့ကရန်ပုံငွေစာရွက်စာတမ်းများ၏တရားဝင်အရင်းအမြစ်မြင်ချင်သွားရသည်။ Plus အားသူတို့ရန်ပုံငွေများဥပဒေရေးရာရင်းမြစ်များမှဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေအထောက်အထားများချင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုရယူနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်သိသိသာသာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ဘဏ်များကိုသင် shortcuts တွေကိုယူမသွားပါစေလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်လိုအပ်သောကြောင့်လုံ့လဝီရိယရယူမှကြွလာသည့်အခါဘဏ်သင့်အကောင့်ကိုဖွင့်ရှေ့တော်၌လူအပေါင်းတို့သည်သေတ္တာများစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့သူတို့၏လမ်းကိုရှာဖွေကြောင်းပြည်နယ်တစ်ခု misstatement ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကျနော်တို့မကြာခင်တကယ်ပဲအများကြီးပြောနေမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ရဲ့ပျမ်းမျှ layperson အပြစ်ရှိဖြစ်အနည်းဆုံးသံသယမယ်လို့သူတို့အားတရားစီရင်မှုကိုကြည့်ကြကုန်အံ့။ ဒါခေါ် "ဘေးကင်းလုံခြုံ" တရားစီရင်မှုရှိဒါခေါ် "အခွန်ဟေဗန်" ထက်ပိုမိုတရားမဝင်ဘဏ်လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများရှိသည်။ ကြီး "ကျင့်ဝတ်" တရားစီရင်မှုအဓိကငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ကမ္ဘာထဲမှာရာဇဝတ်သားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း-ရန်ပုံငွေစင်တာများဖွစျဖို့ထွက်လှည့်။ နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထိုသူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်က၎င်း၏ 50 ပြည်နယ်များအတွင်း laundered ကမ္ဘာပေါ်မှာ laundered ငွေအပေါင်းတို့၏ခန့်မှန်းခြေတဝက်ထုတ်လွှင်။ ဤသည်ဝက် $ 300 ဘီလီယံကိုအမေရိကန်တစ်ဦးရှေးရိုးစွဲခန့်မှန်းချက်မှဘာသာပြန်ပေးသည်။
၏သင်တန်း, ယူနိုက်တက်စတိတ်တစ်ခုတည်းသော High-အခွန်မဟုတ်ပါ, သို့မဟုတ်ဤလှုပ်ရှားမှုမှအိမ်ပြန်ကြောင်း "ကြီးမားသော" တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။ ထိုကဲ့သို့သောဗြိတိန်နှင့်ဂျာမနီကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်ဒီသံသယရှိဂုဏ်ထူးအတွက်မျှဝေပါ။ အမေရိကန်ကလူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်များစွာသောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကြိုးခံစားခှငျ့ပေးလျော်ဥပဒေရေးရာ tools များအတွက်ကမ်းလွန်ရန်ပုံငွေများရွေ့လျား။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ပုံမှန်အားအခွန်လျှော့ချရေးတို့အတွက်ထိရောက်ဘူး။ အခွန်င့်လင်းမြင်သာသစ်ကိုအဖြစ်မှန်, အခွန်ကြောင်းဖြစ်ခြင်း ရှောငျခွငျး ကမ်းလွန်အဆောက်အဦများ အသုံးပြု. အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်သလိုလက်တွေ့ကျကျထိရောက်တဲ့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
မိစ္ဆာအမြင်အခွန်ဆိပ် / ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတရားစီရင်မှုပြစ်မှုဆိုင်ရာမရဏ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများအတွက်စံပြဒေသမူများဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်မှန်, သို့သော်, high-အခွန်တရားစီရင်မှုသည်ဤရန်ပုံငွေများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ low-အခွန်ဟေဗန်တာသေးငယ်ရာခိုင်နှုန်းခြုံငုံကိုယ်စားပြုသည်။
အချက်အလက်များဤအမျိုးအစား, သင်တန်း၏, အလွန်ခဲအစဉ်အဆက်ကတီဗီသတင်းနှင့်ပုံနှိပ်မီဒီယာများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်နေကြသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါတရားစီရင်မှုသည်ဤအံ့သြအထင်လွဲမှားမှုများအားဖြင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအတော်လေးရှက်ဖြစ်ကြသည်။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကတွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်ကမ်းလွန်ဘဏ်ပတ်ဝန်းကျင်အများအပြားဒဏ္ဍာရီလည်းရှိပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့အတွက် delve အခါ, သို့သော်ကျနော်တို့ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအလွန်အမင်းစညျးမဉျြးစညျးကမျးကြောင်းကိုသိမြင်ရကြ၏။ ဘဏ်များဟာသူတို့ရဲ့လိုင်စင်ဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်မြိန်ဖောက်သည်အပေါ်တာခိုင်မာသောဒဏ်ငွေခံရနိုင်ပါတယ်။ အားပြိုင်မှုတသမတ်တည်းသူတို့ရဲ့ Know-သင့်ရဲ့-client ကိုမှတ်တမ်းများအဘို့အဘဏ်များ audit ။ ဘဏ်စစျဆေးသံသယရှိခဲ့လျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမြိန်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့မိမိတို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကောင့်ကိုအသုံးပြုသည်, သူတို့ကအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကောင့်ဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, ဤထုံးစံများတွင်အသုံးပြုလျှင်, သူတို့သည်မကြာမီဘဏ်ထဲကကန်ပါလိမ့်မည်။
ယင်း၏လိုင်စင်စောင့်ရှောက်ခြင်းတစ်ဦးကဘဏ်ကဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းများကအောက်ပါသူတို့ကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Plus အား, သူတို့ကတိကျခိုင်မာစွာဘဏ္ဍာရေးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိစံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာရပေမည်။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘဏ်များပညတ္တိကျမ်းကိုလိုက်နာရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ကအတွင်းကောင်းသောယောက်ျားတွေနဲ့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေထွက်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
> ကျအခနျး5မှ